समृद्द दुधौली नगर बनाउने कामको थालनी गरिसकेका छौंः नगर प्रमुख राउत - TV Annapurna
October 4, 2018 October 7, 2018 Annapurna TV
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष हुन थाल्यो । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए। चुनावका बेला बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका सपना, कति सपनामै सिमित छन् त कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् । कतै कर्मचारी अभाव त कतै नीति, नियम अभावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको गुनासो पनि आउने गरेको छ । एकातर्फ लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिमाथि जनता अपेक्षाको चाङ ठुलो । अर्कोतर्फ लामो समय कर्मचारीको मनोमानीमा चलेका स्थानीय निकायलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बनाउनुपर्ने चुनौती । यस्तो अवस्थामा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाले के के गर्यो ? जनताको अपेक्षाकृत काम भयो कि भएन ? आगामी वर्षमा कसरी काम गर्ने योजना बनाएको छ ? दुधौली नगरपालिका प्रमुख घनश्याम राउतसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी अभिमन्यु लामीछानेले कुराकानी गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ वहाँसँग गरिएको कुराकानी:
-तपाई नेतृत्वमा आएपछि नगरपालिकामा भएका मुख्य काम के के हुन ?
मुख्य काम भन्नुपर्दा १२, १३ र १४ तीन वडामा विद्युत पुगेको थिएन । त्यहाँ विद्युत बिस्तारका लागि सर्भे गरेर बिस्तारको काम सुरु गरिएको छ । तीन वटा वडामा सामुदायिक विधुतीकरणको कार्यक्रम संचालन गरेर तीन वर्ष भित्र नगरभरि विद्युत पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौ । ५६ वटा बाल क्लब गठन गरेर बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौ भने बातावरण मैत्री नगर बनाउनको लागि प्रत्येक वडामा फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी भर्ना गरेर डम्किङ साइटको व्यवस्थापन गरिसकेका छौ । फोहर उठाउने गाडीहरु मगाई सकेका छौ । नदी नियन्त्रणको काम पनी महत्वपूर्ण भएकाले कमला नदी, तावा खोला नदी नियन्त्रणको लागि पनि तीब्र रुपमा काम गरिरहेका छौ । सहीद स्मृति पार्क, चिडियाखाना र एरपोर्टको लागी विज्ञ टोली मगाएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भईरहेको छ ।
-जनताले गरेका अपेक्षा के थिए ?
जनताले सम्वृद्द नगर बनोस भन्ने पपेक्षा गर्नु भएको छ । समृद्व नगर बनाउन हामीले पूर्वधारको क्षेत्रमा सडक, विद्युतिकरण, खानेपानी, शिक्षा नै हो । बिशेष गरी आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि आर्थिक र सामाजिक विकासका गतिविधिहरु संचालन गरेका छौ। त्यस अन्तरगत सिपमूलक तालीमहरु, कृषि विकासका कार्यक्रमहरु, पशु विकासका कार्यक्रमहरु गरेका छौ । यस बाट हाम्रो नगरका जनताहरुको आर्थिक समृद्वि हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।
-स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको प्रयोग र कार्यान्व्यन अवस्था कस्तो छ ?
हामीलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । यसलाई ऐन बनाएर जानु पर्ने हुन्छ । हामीले धेरै वटा ऐनहरु निर्माण गरिसकेका छौ । त्यही ऐनको आधारमा अघि बढेका छौ।
-संघ र प्रदेशसँगको समन्व्य कस्तो छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका आ(आफ्नो अधिकार र क्षेत्रहरु छन । त्यो हूदा(हुदै पनि तीनै वटा सरकार समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको बजेट पनि यहा परिचालन हुन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट पनि परिचालन हुन्छ । हामी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकै मातहतको अर्को सरकार भएकाले पनि समन्व्य राम्रै छ ।
-स्थानीय सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष हुन थाल्यो । यो डेढ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? र नगरपालिकाका प्राथमिकता के के हुन् ?
काम गर्दै छौ । जनताका समस्याहरु धेरै छन । बिस्तारै समाधान गर्दै अघि बढ्दै छौं । नगरपालिकाको प्राथमिकताको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सडक सन्जालमा हेटौडा चतरामा निर्माण भईरहेका राष्ट्रिय महत्वको राजमार्ग छ । त्यसले पनि ठुलो सहयोग पुर्याएको छ । अब हामी त्यसै मार्फत गाउँवस्तीमा शाखा सडकहरु बिस्तार गरी राखेका छौ। कमला नदी नियन्त्रण, तावा खोला नियन्त्रण गर्नु पर्ने यी मुद्दाहरु पनी ठुलो मुद्दा भएकाले बिशेष ध्यान केन्द्रीत गरेका छौं । कटान गरेका जमीन उकासेर त्यसमा कृषि उत्पादनका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने योजनामा पनी छौ।
-धेरै नगरमा कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तपाईलाई कत्तिको सहयोग भएको छ ?
अहिले सम्म त आवश्यक सहयोग पाईरहेका छौ। स्थानिय तह हुनु भन्दा १५, २० बर्ष अगाडि देखिका कर्मचारीमा जुन प्रबृत्ति थियो त्यो प्रबृत्ति लाई एकै चोटी परिवर्तन ल्याउन त गारो छ। त्यही पनि पहिले भन्दा सुधार हुदै छ।
-जनताको ढाड सेक्ने गरि कर वृद्दी गरियो भन्ने गुनासो व्यप्त छ । के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय तह भईसकेपछि सम्पति कर लागु नभएको ठाउँमा यो समस्या आएको हो। यसले गर्दा जनताहरुमा कर बढी भएको जस्तो महसूश लागेको छ। त्यसको संगसँगै हिजोको दिनमा भन्दा आज विकास निर्माणको गति पनि तीब्र रुपमा अघि बढेको छ। हामीले करबाट विकास निर्माण गरेर जनतालाई अनुभूति दिलाउनु पर्छ।
-तपाईको कार्यकाल पूरा भएपछि नगरको स्वरुप कस्तो होला ?
मेरो कार्यकाल समाप्त भईसक्दासम्म दुधौली नगर सुन्दर र समृद्व बन्ने तीर अघि बढ्छ। त्यसका लागी हामीले गर्नु पर्ने पूर्वाधार विकासका कामहरु शुरू गरिसकेका छौ । दुधौली नगरपालिकालाई आर्थिक रूपले समृद्व, पूर्वधारयुक्त बनेको पाउनु हुनेछ।
आइजीपी खनालको राजिनामा माग्दै नविना लामा र रञ्जित तामाङ गृहमन्त्रालय पुगे